I-Non Asbestos Gasket Material Factory - China Abakhiqizi be-Non Asbestos Gasket Material, abahlinzeki
I-QF3710 Ibhodi elingamelana nokushisa okuphansi kwe-asbestos
Yenziwe nge-aramid fiber, i-carbon fiber, i-fiber yokwenziwa kwamaminerali, uwoyela nokunamathela kokushisa okuphansi, okufaka izithasiselo ezisebenzayo ezihambisanayo, futhi kwenziwa ngendlela egingqikayo.
Ifanele zonke izinhlobo zamafutha, amanzi, ifriji, igesi ejwayelekile, neminye imidiya njengezinto zokuvala uphawu.
Kunconyelwa ikakhulukazi ukufakwa kwesimo somoya, ama-compressors, ama-heat heat exchanges nezinye izinhlelo zokuqandisa noma ukuxhumana nezinhlelo zokupholisa njengama-gaskets wokuvala uphawu.
QF3736 Ishidi lokumelana nokushisa okungaphansi kwe-asbestos
Yenziwe nge-fiber ye-aramid, i-carbon fiber, i-fiber yokwenziwa kwamaminerali, i-adhesive emelana nokuwoyela, engeza izithasiselo zokusebenza ezihambisanayo, futhi yenziwa ngendlela egingqikayo.
Ifanele zonke izinhlobo zamafutha, igesi ejwayelekile, amanzi neminye imidiya njengezinto zokubekwa uphawu.
Kunconywa ikakhulukazi embonini ejwayelekile njengokufaka uphawu kwempahla yomugqa.
Yenziwe nge-aramid fiber, i-carbon fiber, i-fiber fiber, i-adhesive nemithi yokunamathela, engeza izithasiselo zokusebenza ezihambisanayo, futhi yenziwa ngendlela egingqikayo.
Ukufaka amanzi kuketshezi olufana nezinhlobo ezahlukahlukene zamafutha, umoya, amanzi, umhwamuko, njll.
Isetshenziswa njenge-gasket yezimoto, izithuthuthu, imishini, uphethiloli-chemistry, njll.
QF3716 Ishidi lokufaka uphawu lwe-asbestos okungelona
Yenziwe nge-fiber ye-aramid, i-cellulose fiber, i-synthetic fiber fiber, i-adhesive nemithi yokunamathisela, engeza izithasiselo zokusebenza ezihambisanayo, futhi yenziwa ngendlela egingqikayo.
Ingasetshenziswa maqondana namafutha, igesi ejwayelekile, amanzi, umusi, njll.
Isetshenziswa njenge-gasket yenjini yomlilo yangaphakathi, i-pipe flange, iziqukathi zengcindezi, njll.
Yenziwe nge-aramid fiber, i-fiber yokwenziwa kwamaminerali, ingcina emelana nowoyela, engeza izithasiselo zokusebenza ezihambisanayo, futhi yenziwa ngendlela egingqikayo.
Kunconywa ngokukhethekile njengezinto ze-gasket zemishini yasolwandle.
Ingasetshenziswa maqondana namafutha, igesi ejwayelekile, amanzi, njll.
Isetshenziselwa injini, futha kawoyela, futha yamanzi, zonke izinhlobo zemishini, ipayipi le-flange njengokufaka impahla yeliner.
Kunconywa ngokukhethekile ukuthi isetshenziswe njengokufaka uphawu gasket komshini wenhloso ejwayelekile nazo zonke izinhlobo zamaphampu.
QF3700 Ishidi lokumelana nokushisa okuphansi kwe-QB3700
I-FBYS411 Ishidi lokufaka uphawu lwe-asbestos okungelona
Nge-graphite powder, i-Kevlar fiber kanye nomdlalo okhethekile wokunamathela okhethekile, engeza izithasiselo zokusebenza ezihambisanayo, ukusetshenziswa kokukopisha uhlelo lwezomthetho.
Ngokunamathela kokumelana nokushisa, i-asbestos-free fiber ukumelana nokushisa kanye ne-inormeric high-temperature filler ukubambisana okukhethekile, engeza izithasiselo zamakhemikhali ezihambisanayo, ukusetshenziswa kokukopisha uhlelo lwezomthetho.
FBYS411 ifayibha-kwagcizelela graphite graphite umbhali ipuleti
I-FBYS268 Ishidi lokufaka uphawu lwe-asbestos elingelona
I-aramid fiber, i-carbon fiber, i-fiberglass, njll njengempahla yamathambo, ukunamathela okubambisene nowoyela okukhethekile, engeza izithasiselo zamakhemikhali ezihambisanayo, ukugcwalisa, ukusetshenziswa kohlelo lwezomthetho lokucindezela i-roller.
I-FBYS402 Ishidi lokufaka uphawu lwe-asbestos okungelona
Nge-butyl latex, imicu engena-asbesto nokugcwaliswa okusebenzayo ukubambisana okukhethekile, engeza izithasiselo zamakhemikhali ezihambisanayo, ukusetshenziswa kokukopisha uhlelo lwezomthetho.